सकियो मतदान, कसको पक्षमा कति भोट खस्यो ? — Imandarmedia.com
सकियो मतदान, कसको पक्षमा कति भोट खस्यो ?
काठमाडौँ। नेकपा एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि भएको मतदान सकिएको छ। अब केही बेरमा मतगणका कार्य सुरु हुनेछ। निर्वाचनमा करिब २ हजार ८० मत खसेको केन्द्रीय निर्वाचन समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।
तर मत खसेको विवरण औपचारिक रुपमा सार्वजनिक हुन बाँकी छ। २ हजार १५३ प्रतिनिधिमध्ये २ हजार ८० भन्दा बढी मत खसेको छ,’ निर्वाचन समितिका एक सदस्यले भने। निर्वाचनमा विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरिएकाले मत परिणाम छिटो सार्वजनिक हुने अपेक्षा छ।
एमाले नेता योगेश भट्टराईले मतदान सकिएको साढे एक दुई घण्टाभित्रमा मतपरिणाम आउने जानकारी दिए। मंगलबार बिहान चार बजेदेखि मतदान सुरु भएको थियो। चितवनको सौराहमा जारी बन्दसत्रमा मत खसाल्न एमाले प्रतिनिधिहरु रातभर जाग्राम बसेका थिए।
प्रतिनिधिहरुको लाइनमै पुगेर उम्मेदवारहरूले भोट मागेका थिए। चितवनको सौराहमा आयोजित नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको बन्दसत्रमा अध्यक्षसहित केही पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यहरू चयनका लागि निर्वाचन भएको हो।
सबैभन्दा पहिले अध्यक्षका उम्मेदवार केपी शर्मा ओलीले मतदान सुरु गरेका थिए। अध्यक्षमा ओली र भीम रावल उम्मेदवार छन्। पार्टीका प्रतिनिधिहरुलाई भीम रावल लगायतका उम्मेदवारलाई भोट नदिनू भन्दै ओली पक्षले पर्चा वितरण गरेपछि रावल पक्षले त्यसलाई आचार संहिता विपरीत भएको जनाएको छ।
तेस्तै, नेकपा एमालेका नेता यामलाल कडेललाई झट्का लागेको छ। एमालको केन्द्रीय पदाधिकारीमा आकांक्षा राखेका कडेलमाथि ठूलो भज्रपात आइलागेको हो। कडेलले १०औं महाधिवेशनबाट कर्णालीले पदाधिकारी पाउनै पर्ने माग गरेका थिए।
तर आइतबार साँझ एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गरेको १९ सदस्यीय पदाधिकारीको सूचीमा उनको नाम नअटेपछि छटपटी भएको छ। कर्णालीबाट सचिवको चर्चा गरिएका कंडेल केन्द्रीय सदस्यमै सीमित रहेका छन्।
एमालेको कर्णाली प्रदेश सहसंयोजनक एवंम पूर्वमन्त्री समेत रहेका कँडेलले सचिव पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्दै भनेका थिए, ‘हामी जहिल्यै अन्य प्रदेशका नेताहरूबाट नेतृत्व लिइरहृयौं, अब म स्वयम नै अघि सर्छु, चुनावै लडनु परे लड्छु।
तर कँडेल केपी ओलीविरुद्ध जान सकेनन्। कर्णालीमा यसअघि एमालेका ११ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । अहिले ३०१ जनामा २१ जना केन्द्रीय सदस्य कर्णालीबाट परेका छन्। पदाधिकारीमा दाबी गरेका कँडेल पनि २१ भित्रै सीमित भएका छन्।
कँडेलसँगै सदस्यमा सुर्खेतकै नवराज रावत, मोहनमाया ढकाल, हुम्लाका दल रावल, जाजरकोटका सीपी घर्ती, डम्बर बहादुर सिंह, निरज आचार्य, दैलेखका धर्मराज रेग्मी, विष्णु रिजाल, राजबहादुर बुढा, लक्ष्मी पोखरेल, मीना रखाल, सल्यानका गुलाबजंग शाह परेका छन्।
यस्तै नेशनल शाही, तीर्था गौतम, भैरवसुन्दर श्रेष्ठ, दीपा शर्मा रुपाखेती, मोहन बानियाँ, दक्षिणा शाही, वद्मी क्वांरी बोहोरा, सूर्यकुमारी श्रेष्ठको नाम केन्द्रीय सदस्यमा अटाए ।कर्णालीबाट भूगोलतर्फका ६ जना केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत चयन भएका छन्।
अध्यक्ष ओलीको सूचीमा नअटाएर उम्मेदवारी दिएका योगेन्द्रबहादुर शाहीले उम्मेदवारी फिर्ता लिएपछि सदस्यहरू सर्वसम्मत भएका हुन् ।एमाले कर्णालीका सचिव धर्मराज रेग्मीसहित गुलाबजंग शाह,
डम्बरबहादुर सिंह, नागिन्द्र शाही ९नेशनल०, निरज आचार्य र विष्णु रिजाल निर्विरोध भएका छन्। कर्णालीबाट केन्द्रीय सदस्यमा तीनजना महिला पनि सर्वसम्मत चएन भएका छन्।
कर्णालीबाट तीर्था गौतम, मीनासिंह रखाल र मोहनमाया ढकाल महिला कोटाबाट निर्विरोध चयन भएका हुन्। यद्यपि निर्वाचन आयोगले आधिकारिक घोषणा गर्न भने बाँकी नै छ।